“Ndandifuna Ukuba Ngumfundisi” | IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu
IMboniselo | Meyi 2013
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Ndandifuna Ukuba Ngumfundisi”
Kubalisa URoberto Pacheco
UNYAKA WOKUZALWA: 1957
UBOMI BANGAPHAMBILI: WAYEFUNDELA UKUBA NGUMFUNDISI; ENEQWAKAZA
Ndazalelwa kwidolophu encinane yaseTexcoco. Ngelo xesha izitrato ezininzi kule dolophu zazingenayo itha. Kwakuqhelekile ukubona abantu beqhuba iidonki zabo ezilayishe izinto ababezithengisa. Ekhaya sasihlupheka ibe mna ndandingowesixhenxe kubantwana abasithoba. Utata wayeziphilisa ngokuthunga iimbadada. Kodwa wasweleka xa ndandineminyaka esixhenxe. Ukususela ngoko, umama wawa evuka esikhulisa.
Utatomkhulu wayeyincutshe yomculo, ibe wayengumbhexeshi wekwayara yomculo wecawa. Phantse wonke umntu ekhaya wayenobuchule bokudlala isixhobo esithile somculo. Umama wayecula kwikwayara yecawa, ibe umalume yena wayengumlonji ekwadlala nepiyano. Sasiyithanda icawa—ndandinomsebenzi ecaweni ibe ndandifuna ukuba ngumfundisi. Kodwa ke ndandizithanda neemuvi zekarati. Njengoko ndandiqhubeka ndibukela ezo muvi, ndaya ndisiba nguphuma-silwe.
Ndaya kufunda kwisikolo secawa kwidolophu yasePuebla. Ndandifuna ukuba ngumfundisi weCawa yamaKatolika. Kodwa ke xa ndandikunyaka wokugqibela kwenzeka into eyandenza ndangayiginyi ncam iCawa yamaKatolika. Kaloku enye intombazanyana eyayingunongendi yazama ukulala nam. Andizange ndivume, kodwa ke loo nto yandenza ndafuna ukutshata. Ngaphezu koko, ndaphawula ukuba abefundisi abaninzi babethetha le baze benze leya. Ekugqibeleni, ndandingasafuni ukuba ngumfundisi.
Ndandinomsebenzi ecaweni ibe ndandifuna ukuba ngumfundisi, kodwa ke ndandizithanda neemuvi zekarati ibe ndaqalisa ukuba yindlobongela
Ndagqiba kwelokuba ndiye kufundela umculo kwisikolo esasikwisixeko saseMexico. Emva kokuba ndiphumelele apho, ndatshata ibe mna nomfazi wam saba nabantwana abane. Imali yokondla intsapho yam ndandiyifumana ngokucula xa kukho iingqungquthela kwiCawa yamaKatolika.
Izinto azizange zihambe kakuhle emtshatweni wam kwasekuqaleni. Mna nomfazi wam sasisoloko sisilwa kuba sobabini sasikhweleta. Ekuqaleni sasithukana kodwa ke ekugqibeleni sabhenela emanqindini. Emva kweminyaka eli-13 sagqiba kwelokuba sahlukane kamva sadivosa.
INDLELA EBUTSHINTSHE NGAYO UBOMI BAM IBHAYIBHILE:
AmaNgqina kaYehova ndadibana nawo okokuqala kwanangaphambi kokuba ndohlukane nomfazi. Kwafika amaNgqina amabini ekhaya aza acela ukusifundisa iBhayibhile. Ndandicinga ukuba akhonto ndingayaziyo ngeBhayibhile ngoko ndathi ndiza kuwabonisa ukuba akho yawo. Ndawabuza imibuzo enzima endandicinga ukuba azikho iimpendulo zayo. Kodwa ke ndothuka xa ayiphendula yonke ngeBhayibhile. Kwatsho kwathi tha kum ukuba ndandingazi nowathwethwa. Noko ke, umfazi wam wayengawafuni amaNgqina ibe nam ndandixakekile, ngoko ke ayeka ukuza.
Kwiminyaka emihlanu kamva, ndandihlalisana nenye intokazi ekuthiwa nguElvira xa ndadibana namaNgqina kaYehova kwakhona. UElvira wayengenangxaki namaNgqina, ngoko kwaba lula ngam ukufunda nawo iBhayibhile rhoqo. Sekunjalo, kwaqengqeleka iminyaka ngaphambi kokuba nditshintshe iindlela zam ezigwenxa.
Ndaye ndaqonda ukuba ukuze ndimkhonze ngentliziyo epheleleyo uYehova kuza kufuneka ndenze utshintsho olukhulu. Okokuqala, kwafuneka ndiyeke ukucula kwiingqungquthela zamaKatolika, nto leyo eyayitheth’ ukuthi ndifanele ndifune omnye umsebenzi. (ISityhilelo 18:4) Kwakhona, kwafuneka mna noElvira sitshate ngokusemthethweni.
Kodwa ke enye yezona zinto kwakunzima ukwahlukana nazo liqwakaza. Ndancedwa kakhulu ziivesi zeBhayibhile ezimbini: INdumiso 11:5 ebonisa ukuba uYehova uluthiyile ugonyamelo, neyoku-1 kaPetros 3:7 eyandifundisa ukuba ukuze uYehova ayiphulaphule imithandazo yam, ndifanele ndimphathe ngesidima umfazi wam. Njengoko ndandicamngca ngezi vesi yaye ndithandazela uncedo lukaYehova, ndade ndakwazi ukuwulawula umsindo.
IBhayibhile yandifundisa ukuba ukuze uYehova ayiphulaphule imithandazo yam, ndifanele ndimphathe ngesidima umfazi wam
INDLELA ENDINCEDE NGAYO IBHAYIBHILE:
Ngoku ndihleli ngoxolo nentsapho yam. Ndizama kangangoko ukulungisa izinto phakathi kwam noonyana bam bomtshato wokuqala yaye ndizama ukunceda intsapho endinayo ngoku ukuba ibe nokholo olomeleleyo.
Xa ndandisengumntwana, ndandifuna ukuba ngumfundisi ndize ndincede abantu. Ngoku ndiqinisekile ukuba ubomi bam bunenjongo. Ndifundisa abantu umculo ukuze ndondle intsapho yam. Ndiyambulela uYehova ngokuba nomonde aze andinike ithuba lokuguquka ndize ndimkhonze!
INQAKU ELINGUMXHOLO Kutheni Abantu Besithi UThixo Ukhohlakele?
INQAKU ELINGUMXHOLO Ngaba Iintlekele Zemvelo Zibubungqina Bokuba UThixo Ukhohlakele?
INQAKU ELINGUMXHOLO Ngaba UThixo Wayekhohlakele Xa Wayegweba Abantu Mandulo?
INQAKU ELINGUMXHOLO Ngaba Uza Kumthemba UThixo?
IBHAYIBHILE IYABUTSHINTSHA UBOMI BABANTU “Ndandifuna Ukuba Ngumfundisi”
KEYS TO FAMILY HAPPINESS Indlela Yokuphucula Ubuhlobo Nezihlobo Nezalamane Zeqabane Lakho Lesibini
SONDELA KUTHIXO Ngaba Nyhani UYehova Usikhathalele?
Ngaba AmaNgqina KaYehova Acinga Ukuba Ngawo Kuphela Aza Kusindiswa?
Meyi 2013 | Ngaba UThixo Ukhohlakele?
IMBONISELO Meyi 2013 | Ngaba UThixo Ukhohlakele?